ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲမှာ အမှတ်ရနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဆိုးပေကြီးများ
23 Aug 2018 . 4:55 PM
ဘောလုံး အားကစားနည်းဆိုတာက ပရိသတ်တွေ သိတဲ့အတိုင်း ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်မှုကို အားပြုထားတာဖြစ်လို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကစားရတာတွေ၊ တစ်ခါတလေကျရင် စိတ်ဒေါသအလျောက် ပေါက်ကွဲတာမျိုးတွေကလည်း ဘောလုံးလောကမှာ မဆန်းတော့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပါ။ တချို့ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားတွေဆိုရင် Sportsmanship မဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေ၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကစားတဲ့ပုံစံကြောင့် ဝေဖန် ခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း အဲဒီကစားသမားတွေကို အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တွေ မေ့လို့ မရသေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီကစားသမားတွေဟာ ကိုယ့်အသင်းအနိုင်ရဖို့ နိုင်လိုစိတ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကစားခဲ့ကြတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ အပြုအမူ၊ ကစားဟန်တွေက ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြနေပေမယ့် အသင်းအတွက် အစွမ်းကုန် ပေးဆပ်ထားတဲ့ Professional ပီသတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပရိသတ်တွေက လေးစား နှစ်သက်ကြလို့ပါပဲ။ တစ်ခေတ်တခါတုန်းက ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ကြမ်းရမ်းခဲ့ကြတဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဆိုးပေကြီးတွေကို ပရိသတ်တွေ ပြန်လည် အမှတ်ရဖို့အတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . . .
ဘူလ်ဂေးရီးယား ဘောလုံးလောကရဲ့ ထာဝရအကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရသူ စတွိုက်ကော့ဗ်ဟာ ပြိုင်ဘက်ဂိုးဧရိယာအတွင်းမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဖြစ်သလို ကြမ်းတဲ့ရမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း ပြိုင်ဘက်ကင်းပါပဲ။ ဘာစီလိုနာ ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ခြေထောက်ကို တမင်တကာ တက်နင်းခဲ့လို့ ပွဲပယ်ခံရဖူးတယ်။ ‘The Dagger’၊ ‘The Gunslinger’ လို့ နာမည်ပြောင် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိ ကြမ်းရမ်းခဲ့သူပါပဲ။ စတွိုက်ကော့ဗ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နယ်သာလန်နဲ့ ဘာစီလိုနာ ဂန္ထ၀င်ကြီး ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff က အခုလို မှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ “စတွိုက်ကော့ဗ်ဟာ နတ်ဆိုးရဲ့ နို့ရည်သောက်သုံးပြီး ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ”တဲ့။
အီတလီနဲ့ အေစီမီလန် ဂန္ထ၀င်လူဆိုးကြီး ဂတ်တူဆိုရဲ့ အကြောင်းကတော့ အထူးပြောစရာ မလိုပါဘူး။ အေစီမီလန်မှာ ကစားတုန်းက ကိုယ့်အသင်းဖော်ကို ခက်ရင်းခွနဲ့ ထိုးခဲ့သူ၊ စပါးအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာ စပါးအသင်း လက်ထောက်နည်းပြ ဂျိုးဂျော်ဒန် Joe Jordan ကို လည်ပင်းညှစ်ခဲ့သူ၊ ဆီယွန်မှာ ကစားတော့လည်း ဒိုင်လူကြီးဆီက အ၀ါကတ်ကို လုယူပြီး ပြိုင်ဘက်ကစားသမားကို ပြသခဲ့သူ စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။
အာဆင်နယ်အကြောင်းကို ပြောရင် ဗီအဲရာကတော့ မပါမဖြစ်ပါဘဲ။ သူ့အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင် ရွိုင်ကိန်း Roy Keane နဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ပွဲတွေကလည်း အခုအချိန်အထိ ပြေစမှတ် ဖြစ်နေဆဲပဲ။ အသင်းအနိုင်ရဖို့ဆိုရင် ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရဖို့ ၀န်မလေးတဲ့ ဗီအဲရာလို ကစားသမားမျိုးကို ပရိသတ်တွေ အခုအချိန်အထိ အမှတ်ရနေဆဲပါ။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူးတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ကိုလည်း အခု စာရင်းထဲမှာ မပါမဖြစ် ထည့်သွင်းရမယ့်သူပါ။ အရပ် (၆’၅”) မြင့်တဲ့ Monster ကြီးက ပြိုင်ဘက်တွေ၊ အသင်းဖော်တွေဆိုတာ မသိဘူး၊ စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ထ ဗျင်းတတ်တဲ့သူကြီးပါ။ တိုက်ကွမ်ဒိုမှာ ခါးပတ်နက် ရခဲ့တဲ့သူဆိုတော့လည်း ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ အေစီမီလန်မှာ ကစားတုန်းကဆိုရင် သူ့လိုပဲ လူကြမ်းကြီး ဂတ်တူဆိုနဲ့လည်း သတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို သီယာဂိုဆေးလ်ဗား Thiago Silva က “Rino (ဂတ်တူဆို) နဲ့ ဇလာတန်တို့ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလည်းပြီးရော အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ သတ်ကြတော့တာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ ဂတ်တူဆိုရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကိုင်မြှောက်ပြီး အမှိုက်ပုံးထဲကို လွှင့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။
ခြေစွမ်းကောင်းသလောက် စရိုက်ဆိုးတဲ့ ကစားသမားထဲမှာ မာတာရာဇီလည်း အပါအ၀င်ပါပဲ။ ပြိုင်ဘက်ကို ခြေထောက်နဲ့ တက်နင်းတာ၊ တံတောင်နဲ့ရိုက်တာ၊ အသားလွတ် ကန်တာတွေက မာတာရာဇီအတွက် သိပ်မဆန်းပါဘူး။ နောက်ဆုံးကျမှ ဇီဒန်း Zidne ရဲ့ ခေါင်းတိုက်စွမ်းရည်ပြတာကို ခံခဲ့ရသူပါ။
တစ်ချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ “ကရာတေးကန်ချက် Karate Kicks” ပိုင်ရှင် King Eric က မန်ယူပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ ကွင်းထဲမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ပြဿနာရှာပါစေ၊ မယုံနိုင်လောက်တဲ့ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်၊ ကော်လံ အမြဲထောင်ထားပြီး ဂိုးသွင်းပြီးရင် မခန့်လေးစားပုံစံနဲ့ အောင်ပွဲခံတတ်တဲ့ ကန်တိုနာရဲ့ ပုံရိပ်တွေက ဒီနေ့ခေတ် Modern ဘောလုံးလောကအထိ လွှမ်းမိုးထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ရွိုင်ကိန်း Roy Keane
ကန်တိုနာနဲ့ အပြိုင် ကြမ်းခဲ့ပြီး ကန်တိုနာ မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ မန်ယူရဲ့လူကြမ်းကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ကျော် ၀န်းကျင်ကာလတွေမှာ ဗီအဲရာ-ရွိုင်ကိန်း အတွဲက ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး နယူးကာဆယ် ဂန္ထ၀င်ကြီး အလန်ရှီးယား Alan Shearer ကို ပါးပိတ်ရိုက်ခဲ့တာ၊ မန်စီးတီးကစားသမား ဟာလန်း Haaland ကို ခြေထောက်ကျိုးအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကန်ခဲ့တာ စတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကလည်း ရွိုင်ကိန်းအတွက် Legacy မှတ်တမ်းတွေပါပဲ။
ဒီကစားသမားတွေကတော့ တစ်ခေတ်တခါက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဆိုးပေကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းမှာ မပါဝင်ပေမယ့် သူတို့လိုပဲ ဆိုးသွမ်းရမ်းကားတဲ့ မာရာဒိုနာ Maradona ၊ ရိုမာရီယို Romario၊ ဂတ်စကွိုင်း Gascoigne ၊ ရွန်နီ Rooney ၊ ဒီယွန်း De Jong ၊ ပီပီိ Pepe တို့လို ကစားသမားတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကစားသမားတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကြမ်းရမ်းပါစေ သူတို့ရဲ့ ဘောလုံးစွမ်းရည်၊ အောင်မြင်မှု မှတ်တမ်းတွေအရ သူတို့ဟာ အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ခဲ့သူတွေ၊ နိုင်လိုစိတ် ပြင်းပြတဲ့သူတွေ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး . . . .
ပရိသတျတှေ ရငျထဲမှာ အမှတျရနဆေဲဖွဈတဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဆိုးပကွေီးမြား
ဘောလုံး အားကစားနညျးဆိုတာက ပရိသတျတှေ သိတဲ့အတိုငျး ခန်ဓာကိုယျ ကွံ့ခိုငျမှုကို အားပွုထားတာဖွဈလို့ တဈဦးကိုတဈဦး တှနျးတှနျးတိုကျတိုကျ ကစားရတာတှေ၊ တဈခါတလကေရြငျ စိတျဒေါသအလြောကျ ပေါကျကှဲတာမြိုးတှကေလညျး ဘောလုံးလောကမှာ မဆနျးတော့တဲ့ ဖွဈရပျတှပေါ။ တခြို့ နာမညျကြျော ဘောလုံးသမားတှဆေိုရငျ Sportsmanship မဆနျတဲ့ အပွုအမူတှေ၊ ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ကစားတဲ့ပုံစံကွောငျ့ ဝဖေနျ ခံခဲ့ရပမေယျ့လညျး အဲဒီကစားသမားတှကေို အခုအခြိနျအထိ ပရိသတျတှေ မလေို့ မရသေးပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီကစားသမားတှဟော ကိုယျ့အသငျးအနိုငျရဖို့ နိုငျလိုစိတျပွငျးပွငျးနဲ့ ကစားခဲ့ကွတာကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ အပွုအမူ၊ ကစားဟနျတှကေ ကွမျးတမျးရိုငျးပွနပေမေယျ့ အသငျးအတှကျ အစှမျးကုနျ ပေးဆပျထားတဲ့ Professional ပီသတဲ့ စိတျဓာတျကို ပရိသတျတှကေ လေးစား နှဈသကျကွလို့ပါပဲ။ တဈခတျေတခါတုနျးက ဘောလုံးကှငျးထဲမှာ ကွမျးရမျးခဲ့ကွတဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဆိုးပကွေီးတှကေို ပရိသတျတှေ ပွနျလညျ အမှတျရဖို့အတှကျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . . .
ဘူလျဂေးရီးယား ဘောလုံးလောကရဲ့ ထာဝရအကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူးလို့ သတျမှတျခံထားရသူ စတှိုကျကော့ဗျဟာ ပွိုငျဘကျဂိုးဧရိယာအတှငျးမှာ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံး ကစားသမားဖွဈသလို ကွမျးတဲ့ရမျးတဲ့နရောမှာလညျး ပွိုငျဘကျကငျးပါပဲ။ ဘာစီလိုနာ ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ဒိုငျလူကွီးရဲ့ ခွထေောကျကို တမငျတကာ တကျနငျးခဲ့လို့ ပှဲပယျခံရဖူးတယျ။ ‘The Dagger’၊ ‘The Gunslinger’ လို့ နာမညျပွောငျ သတျမှတျခံခဲ့ရတဲ့အထိ ကွမျးရမျးခဲ့သူပါပဲ။ စတှိုကျကော့ဗျနဲ့ ပတျသကျပွီး နယျသာလနျနဲ့ ဘာစီလိုနာ ဂန်ထဝငျကွီး ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff က အခုလို မှတျခကျြပေးခဲ့ဖူးတယျ။ “စတှိုကျကော့ဗျဟာ နတျဆိုးရဲ့ နို့ရညျသောကျသုံးပွီး ကွီးပွငျးခဲ့တဲ့သူ တဈယောကျပါ”တဲ့။
အီတလီနဲ့ အစေီမီလနျ ဂန်ထဝငျလူဆိုးကွီး ဂတျတူဆိုရဲ့ အကွောငျးကတော့ အထူးပွောစရာ မလိုပါဘူး။ အစေီမီလနျမှာ ကစားတုနျးက ကိုယျ့အသငျးဖျောကို ခကျရငျးခှနဲ့ ထိုးခဲ့သူ၊ စပါးအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲမှာ စပါးအသငျး လကျထောကျနညျးပွ ဂြိုးဂြျောဒနျ Joe Jordan ကို လညျပငျးညှဈခဲ့သူ၊ ဆီယှနျမှာ ကစားတော့လညျး ဒိုငျလူကွီးဆီက အဝါကတျကို လုယူပွီး ပွိုငျဘကျကစားသမားကို ပွသခဲ့သူ စတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့တယျ။
အာဆငျနယျအကွောငျးကို ပွောရငျ ဗီအဲရာကတော့ မပါမဖွဈပါဘဲ။ သူ့အကွောငျးကို ပွောမယျဆိုရငျလညျး မနျယူအသငျးခေါငျးဆောငျ ရှိုငျကိနျး Roy Keane နဲ့ ဖွဈခဲ့တဲ့ ရနျပှဲတှကေလညျး အခုအခြိနျအထိ ပွစေမှတျ ဖွဈနဆေဲပဲ။ အသငျးအနိုငျရဖို့ဆိုရငျ ဘာတှပေဲဖွဈဖွဈ လုပျရဖို့ ဝနျမလေးတဲ့ ဗီအဲရာလို ကစားသမားမြိုးကို ပရိသတျတှေ အခုအခြိနျအထိ အမှတျရနဆေဲပါ။
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူးတှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျဖွဈတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗဈကိုလညျး အခု စာရငျးထဲမှာ မပါမဖွဈ ထညျ့သှငျးရမယျ့သူပါ။ အရပျ (၆’၅”) မွငျ့တဲ့ Monster ကွီးက ပွိုငျဘကျတှေ၊ အသငျးဖျောတှဆေိုတာ မသိဘူး၊ စိတျမထငျရငျ မထငျသလို ထ ဗငျြးတတျတဲ့သူကွီးပါ။ တိုကျကှမျဒိုမှာ ခါးပတျနကျ ရခဲ့တဲ့သူဆိုတော့လညျး ပိုဆိုးသှားတာပေါ့။ အစေီမီလနျမှာ ကစားတုနျးကဆိုရငျ သူ့လိုပဲ လူကွမျးကွီး ဂတျတူဆိုနဲ့လညျး သတျခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲဒီအကွောငျးကို သီယာဂိုဆေးလျဗား Thiago Silva က “Rino (ဂတျတူဆို) နဲ့ ဇလာတနျတို့ဟာ လကေ့ငျြ့ခနျးလညျးပွီးရော အဝတျလဲခနျးထဲမှာ သတျကွတော့တာပါပဲ။ အဲဒီတုနျးက အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ ဂတျတူဆိုရဲ့ တဈကိုယျလုံးကို ကိုငျမွှောကျပွီး အမှိုကျပုံးထဲကို လှငျ့ပဈခဲ့ပါတယျ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။
ခွစှေမျးကောငျးသလောကျ စရိုကျဆိုးတဲ့ ကစားသမားထဲမှာ မာတာရာဇီလညျး အပါအဝငျပါပဲ။ ပွိုငျဘကျကို ခွထေောကျနဲ့ တကျနငျးတာ၊ တံတောငျနဲ့ရိုကျတာ၊ အသားလှတျ ကနျတာတှကေ မာတာရာဇီအတှကျ သိပျမဆနျးပါဘူး။ နောကျဆုံးကမြှ ဇီဒနျး Zidne ရဲ့ ခေါငျးတိုကျစှမျးရညျပွတာကို ခံခဲ့ရသူပါ။
တဈခြိနျက နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ “ကရာတေးကနျခကျြ Karate Kicks” ပိုငျရှငျ King Eric က မနျယူပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးစှဲ ကစားသမားတဈဦးပါ။ ကှငျးထဲမှာ ဘယျလောကျပဲ ပွဿနာရှာပါစေ၊ မယုံနိုငျလောကျတဲ့ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျ၊ ကျောလံ အမွဲထောငျထားပွီး ဂိုးသှငျးပွီးရငျ မခနျ့လေးစားပုံစံနဲ့ အောငျပှဲခံတတျတဲ့ ကနျတိုနာရဲ့ ပုံရိပျတှကေ ဒီနခေ့တျေ Modern ဘောလုံးလောကအထိ လှမျးမိုးထားနိုငျဆဲဖွဈပါတယျ။
ရှိုငျကိနျး Roy Keane
ကနျတိုနာနဲ့ အပွိုငျ ကွမျးခဲ့ပွီး ကနျတိုနာ မရှိတော့တဲ့အခြိနျမှာ မနျယူရဲ့လူကွမျးကွီးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို လှဲပွောငျးရယူခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၉၀ ကြျော ဝနျးကငျြကာလတှမှော ဗီအဲရာ-ရှိုငျကိနျး အတှဲက ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံကို ဖမျးစားနိုငျခဲ့တယျ။ နောကျပွီး နယူးကာဆယျ ဂန်ထဝငျကွီး အလနျရှီးယား Alan Shearer ကို ပါးပိတျရိုကျခဲ့တာ၊ မနျစီးတီးကစားသမား ဟာလနျး Haaland ကို ခွထေောကျကြိုးအောငျ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ ကနျခဲ့တာ စတဲ့ဖွဈရပျတှကေလညျး ရှိုငျကိနျးအတှကျ Legacy မှတျတမျးတှပေါပဲ။
ဒီကစားသမားတှကေတော့ တဈခတျေတခါက နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဆိုးပကွေီးတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီစာရငျးမှာ မပါဝငျပမေယျ့ သူတို့လိုပဲ ဆိုးသှမျးရမျးကားတဲ့ မာရာဒိုနာ Maradona ၊ ရိုမာရီယို Romario၊ ဂတျစကှိုငျး Gascoigne ၊ ရှနျနီ Rooney ၊ ဒီယှနျး De Jong ၊ ပီပီ Pepe တို့လို ကစားသမားတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီကစားသမားတှေ ဘယျလောကျပဲ ကွမျးရမျးပါစေ သူတို့ရဲ့ ဘောလုံးစှမျးရညျ၊ အောငျမွငျမှု မှတျတမျးတှအေရ သူတို့ဟာ အသငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးပေးဆပျခဲ့သူတှေ၊ နိုငျလိုစိတျ ပွငျးပွတဲ့သူတှေ ဆိုတာ ဘယျသူမှ ငွငျးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး . . . .